လူငယျတှေ အဓိကထားစဉျးစားသငျ့တဲ့ Management (၄)မြိုး – One Daily Media
လူငယျတှဟော နိုငျငံရဲ့အနာဂတျ နိုငျငံရဲ့မြှျောလငျ့ခကျြ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံတိုးတကျဖို့ဆိုရငျ အနာ ဂတျခေါငျးဆောငျတှဖွေဈတဲ့ လူငယျတဈယောကျခငျြးစီက စိတျဓါတျ၊ စညျးကမျးနဲ့ အသိပညာတိုးတကျဖို့ လိုပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့တှေ အသကျကွီးလာတာနဲ့အမြှ လလေ့ာ စရာ တှကေ ပိုပိုမြားလာပါတယျ။ အဲဒီတော့ လူငယျတှမှော ပွောငျးလဲလာတဲ့ Environment အရ လိုကျလြောညီ ထှဖွေဈဖို့နဲ့ အခွားနိုငျငံကလူငယျတှနေဲ့ ရငျဘောငျတနျးနိုငျဖို့ Skills တှကေ ပိုပိုလိုအပျလာပါတယျ။ တကယျတော့ Skills တှဟော ကြှနျတျောတို့ရဲ့ Income တှပေါပဲ။ ခတျေနဲ့အညီရငျဘောငျတနျးနိုငျဖို့ဆိုရငျ မိမိကိုယျတိုငျဟာ နစေ့ဉျနဲ့အမြှတိုးတကျနရေပါမယျ။ Life & Work ဟာ System ကပြွီး Balance ဖွဈနရေပါမယျ။ System မကတြဲ့ Organization တှဟော ရရှေညျ အောငျမွငျဖို့ မလှယျသလို လူငယျတှရေဲ့ဘဝဟာ လညျး ထိုနညျးလညျးကောငျးပဲလို့ ဆိုရပါမယျ။ Balance ဖွဈ ပွီး System ကတြဲ့ဘဝ ဖွဈဖို့အတှကျ ဆိုရငျတော့ အောကျပါအခကျြတှကေို လလေ့ာလိုကျနာသငျ့ ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ လူငယျအမြားစုဟာ အခြိနျကိုမလေးစား ကွပါဘူး။ အခြိနျနောကျကွတယျ။ အခြိနျဆှဲကွတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့တဈနတေ့ာ ၂၄ နာရီကို ဘယျ Sector တှအေ တှကျဆိုပွီး ခှဲထားတာ မရှိကွပါဘူး။ ဆိုပါစို့ ၂၄ နာရီမှာ အလုပျလုပျတာက ဘယျလောကျ၊ Learning လုပျတာက ဘယျလောကျ၊ Health Care အတှကျကဘယျလောကျ ဆိုပွီး သတျမှတျထားတာမြိုး မရှိပါဘူး။ တကယျတော့ အခြိနျကိုကောငျးမှနျစှာ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျသူ တဈယောကျအတှကျ အောငျမွငျမှုကအလိုလိုကပျပါလာသလို Personal Branding ကိုလညျး တညျဆောကျပွီးဖွဈပါတယျ။ လူငယျတှေ အနနေဲ့ မနကျနိုးတာကနအေစ အိပျတာအဆုံး ကိုယျတိုငျ Schedule ဆှဲထားသငျ့ပါတယျ။ To do list တှလေုပျထားသငျ့ပါတယျ။ မိမိကိုယျ မိမိဘောငျခတျ လိုကျခွငျးက စညျးလှတျဝါးလှတျ မဖွဈစတေော့ပါဘူး။
(၂) Money Management
ဒီအခကျြက တျောတျောမြားမြားသိသလောကျ လိုကျလုပျဖို့ မလှယျကူတဲ့အခကျြပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ Income နဲ့မလောကျ တာတို့၊ အကွှေးတှမြေားနတေယျ ဆိုတာ ဒီအခကျြကို Cover မလုပျနိုငျလို့ပါ။ ဆိုပါစို့ သငျ့ Income က ၁လ ၃သိနျး ရတာကို မလောကျငှဘူးလို့သငျတှေးရငျ သငျ့ Income ၆ သိနျးရတဲ့အခါလညျး မလောကျနိုငျပါဘူး။ Income မြားလာတာနဲ့အမြှ ပိုသုံးခငျြလာတာ လူငယျ အမြားစုရဲ့ သဘာဝပါပဲ။ သငျ့ဘဝတိုးတကျခငျြလြှငျ ဒီနရောမှာရနတောနဲ့ကနြေပျပွီး ရပျနလေို့တော့မရပါဘူး။ ဒီ ခတျေမှာ အမွဲ Learning လုပျနိုငျဖို့ဆိုရငျငှကွေေးဟာ လညျး အရေးပါတဲ့အခနျးကဏ်ဍတဈခုကပါဝငျပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ၃ သိနျးဝငျတဲ့သူဟာ ယဘေူယအြသုံးအ တှကျ ၂ သိနျး ကိုဖယျပွီး Learning လုပျဖို့ ၁ သိနျး အစရှိသကဲ့သို့ Income ကို ခှဲခှဲပွီး လစဉျစုသငျ့ပါတယျ။
(၃) Social Management
စာဖတျသူတို့ အနနေဲ့ မိမိကိုယျကိုဘယျလောကျ Social ကောငျးသလဲဟု မေးခှနျးထုတျဖူးပါသလား? လူငယျတှဟော Environment မှာ Reputation တဈခုကို တညျဆောကျနစေဉျ Network ကို တညျ ဆောကျဖို့ အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ တဈယောကျတညျး အနမြေားတဲ့သူကတော့ အလိုလိုကိုဘေးရောကျသှားမှာပါ။ Social Management မှာ မိမိရဲ့အခြိနျတှထေဲကမှ မိမိသူငယျခငျြးတှေ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ၊ ဆရာသမား တှေ၊ လူကွီးမိဘတှနေဲ့တှဆေုံ့ဖို့ သီးသနျ့အခြိနျကို ခှဲထုတျ ထားသငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုပွုလုပျခွငျးဟာ စာဖတျသူတို့ကို ဗဟုသုတနဲ့အခှငျ့အလမျးတှမြေားစှာရလာစပေါတယျ။ Social ကောငျးအောငျ တညျဆောကျမယျဆိုရငျ မိမိရဲ့ PR skill ကိုကောငျးမှနျအောငျ အရငျလလေ့ာသငျယူ သငျ့ပါတယျ။ PR ကောငျးတဲ့သူဟာ Environment မှာ အခြိနျတိုအတှငျးအောငျမွငျမှုရသလို အောငျမွငျလာခဲ့ ရငျလညျး လှယျလှယျနဲ့မပြောကျကှယျသှားဘူးဆိုတာ အဆိုတျောစိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျက သကျသသောဓကပါပဲ။ Network တညျဆောကျဖို့ ကိုယျ့ရဲ့ Lifestyle ကို ပွောငျးလဲပွီး Social ကောငျးသူအဖွဈ ကငျြ့ကွံနထေိုငျဖို့ ကွိုးစားသငျ့ပါတယျ။
(၄) Career Management
စာဖတျသူအမြားစုဟာ မိမိ Career အပိုငျးမှာရော “ဘယျလမျးကွောငျးကို ငါလြှောကျမယျ၊ ဘယျအခြိနျမှာ ဘယျ ရာထူး ရောကျပွီး ဘယျအသကျအရှယျမှာ ငါဦး ဆောငျသူဖွဈရမယျ” ဆိုပွီး Prospects တှထေားဖူးပါ သလား? ဆိုပါစို့ Sales Person တဈယောကျက Experience ၂ နှဈမှာ Executive၊ ၅နှဈမှာ Manager၊ ၈ နှဈမှာ National Sales Manager၊ ၁၀ နှဈမှာ Head အစရှိတဲ့ Goals တှခေထြားရမယျ။ ပွီးရငျ အဲ့ဒီ Goal ကို ရောကျဖို့အတှကျ ကိုယျ့မှာမရှိသေးတဲ့လိုအပျခကျြတှကေိုဖွညျ့ဖို့ Strategy တဈခုဆှဲပွီး Timeline အတှငျး ရအောငျ တဈဆငျ့ခငျြး စီသှားရပါမယျ။
အခြုပျအားဖွငျ့ဆိုရရငျ မိမိရဲ့ Career Goal ကို Time, Money, Social အစရှိတဲ့ ကဏ်ဍအသီးသီး ကို System ကကြ Manage လုပျပွီး Step by Step သှားပါက စာဖတျသူတို့ ထားရှိထားတဲ့ Goal ကို မလှဲဧကနျရောကျပါမယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ။
လူငယ်တွေ အဓိကထားစဉ်းစားသင့်တဲ့ Management (၄)မျိုး
Four types of management that young people should focus on
လူငယ်တွေဟာ နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ် နိုင်ငံရဲ့မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုရင် အနာ ဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ချင်းစီက စိတ်ဓါတ်၊ စည်းကမ်းနဲ့ အသိပညာတိုးတက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လေ့လာ စရာ တွေက ပိုပိုများလာပါတယ်။ အဲဒီတော့ လူငယ်တွေမှာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ Environment အရ လိုက်လျောညီ ထွေဖြစ်ဖို့နဲ့ အခြားနိုင်ငံကလူငယ်တွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ Skills တွေက ပိုပိုလိုအပ်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ Skills တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Income တွေပါပဲ။ ခေတ်နဲ့အညီရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင် မိမိကိုယ်တိုင်ဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးတက်နေရပါမယ်။ Life & Work ဟာ System ကျပြီး Balance ဖြစ်နေရပါမယ်။ System မကျတဲ့ Organization တွေဟာ ရေရှည် အောင်မြင်ဖို့ မလွယ်သလို လူငယ်တွေရဲ့ဘဝဟာ လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲလို့ ဆိုရပါမယ်။ Balance ဖြစ် ပြီး System ကျတဲ့ဘဝ ဖြစ်ဖို့အတွက် ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအချက်တွေကို လေ့လာလိုက်နာသင့် ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လူငယ်အများစုဟာ အချိန်ကိုမလေးစား ကြပါဘူး။ အချိန်နောက်ကြတယ်။ အချိန်ဆွဲကြတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ ၂၄ နာရီကို ဘယ် Sector တွေအ တွက်ဆိုပြီး ခွဲထားတာ မရှိကြပါဘူး။ ဆိုပါစို့ ၂၄ နာရီမှာ အလုပ်လုပ်တာက ဘယ်လောက်၊ Learning လုပ်တာက ဘယ်လောက်၊ Health Care အတွက်ကဘယ်လောက် ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ တကယ်တော့ အချိန်ကိုကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူ တစ်ယောက်အတွက် အောင်မြင်မှုကအလိုလိုကပ်ပါလာသလို Personal Branding ကိုလည်း တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ အနေနဲ့ မနက်နိုးတာကနေအစ အိပ်တာအဆုံး ကိုယ်တိုင် Schedule ဆွဲထားသင့်ပါတယ်။ To do list တွေလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ မိမိကိုယ် မိမိဘောင်ခတ် လိုက်ခြင်းက စည်းလွတ်ဝါးလွတ် မဖြစ်စေတော့ပါဘူး။
ဒီအချက်က တော်တော်များများသိသလောက် လိုက်လုပ်ဖို့ မလွယ်ကူတဲ့အချက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Income နဲ့မလောက် တာတို့၊ အကြွေးတွေများနေတယ် ဆိုတာ ဒီအချက်ကို Cover မလုပ်နိုင်လို့ပါ။ ဆိုပါစို့ သင့် Income က ၁လ ၃သိန်း ရတာကို မလောက်ငှဘူးလို့သင်တွေးရင် သင့် Income ၆ သိန်းရတဲ့အခါလည်း မလောက်နိုင်ပါဘူး။ Income များလာတာနဲ့အမျှ ပိုသုံးချင်လာတာ လူငယ် အများစုရဲ့ သဘာဝပါပဲ။ သင့်ဘဝတိုးတက်ချင်လျှင် ဒီနေရာမှာရနေတာနဲ့ကျေနပ်ပြီး ရပ်နေလို့တော့မရပါဘူး။ ဒီ ခေတ်မှာ အမြဲ Learning လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ငွေကြေးဟာ လည်း အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ၃ သိန်းဝင်တဲ့သူဟာ ယေဘူယျအသုံးအ တွက် ၂ သိန်း ကိုဖယ်ပြီး Learning လုပ်ဖို့ ၁ သိန်း အစရှိသကဲ့သို့ Income ကို ခွဲခွဲပြီး လစဉ်စုသင့်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတို့ အနေနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လောက် Social ကောင်းသလဲဟု မေးခွန်းထုတ်ဖူးပါသလား? လူငယ်တွေဟာ Environment မှာ Reputation တစ်ခုကို တည်ဆောက်နေစဉ် Network ကို တည် ဆောက်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း အနေများတဲ့သူကတော့ အလိုလိုကိုဘေးရောက်သွားမှာပါ။ Social Management မှာ မိမိရဲ့အချိန်တွေထဲကမှ မိမိသူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ဆရာသမား တွေ၊ လူကြီးမိဘတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ သီးသန့်အချိန်ကို ခွဲထုတ် ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဟာ စာဖတ်သူတို့ကို ဗဟုသုတနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရလာစေပါတယ်။ Social ကောင်းအောင် တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ PR skill ကိုကောင်းမွန်အောင် အရင်လေ့လာသင်ယူ သင့်ပါတယ်။ PR ကောင်းတဲ့သူဟာ Environment မှာ အချိန်တိုအတွင်းအောင်မြင်မှုရသလို အောင်မြင်လာခဲ့ ရင်လည်း လွယ်လွယ်နဲ့မပျောက်ကွယ်သွားဘူးဆိုတာ အဆိုတော်စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က သက်သေသာဓကပါပဲ။ Network တည်ဆောက်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ Lifestyle ကို ပြောင်းလဲပြီး Social ကောင်းသူအဖြစ် ကျင့်ကြံနေထိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
စာဖတ်သူအများစုဟာ မိမိ Career အပိုင်းမှာရော “ဘယ်လမ်းကြောင်းကို ငါလျှောက်မယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ် ရာထူး ရောက်ပြီး ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ငါဦး ဆောင်သူဖြစ်ရမယ်” ဆိုပြီး Prospects တွေထားဖူးပါ သလား? ဆိုပါစို့ Sales Person တစ်ယောက်က Experience ၂ နှစ်မှာ Executive၊ ၅နှစ်မှာ Manager၊ ၈ နှစ်မှာ National Sales Manager၊ ၁၀ နှစ်မှာ Head အစရှိတဲ့ Goals တွေချထားရမယ်။ ပြီးရင် အဲ့ဒီ Goal ကို ရောက်ဖို့အတွက် ကိုယ့်မှာမရှိသေးတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဖို့ Strategy တစ်ခုဆွဲပြီး Timeline အတွင်း ရအောင် တစ်ဆင့်ချင်း စီသွားရပါမယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရရင် မိမိရဲ့ Career Goal ကို Time, Money, Social အစရှိတဲ့ ကဏ္ဍအသီးသီး ကို System ကျကျ Manage လုပ်ပြီး Step by Step သွားပါက စာဖတ်သူတို့ ထားရှိထားတဲ့ Goal ကို မလွဲဧကန်ရောက်ပါမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။